Home LX1 Bias Lighting CRI 95 6500K Simulated D65 Jiro fotsy Bias
LX1 Bias Lighting CRI 95 6500K Simulated D65 Jiro fotsy Bias
Vidiny tany am-boalohany $24.95
Vidiny tany am-boalohany $24.95 - Vidiny tany am-boalohany $58.90
Vidiny ankehitriny $34.95
product.variants.choose_variant Extra Small (1 Meter) / Tsy misy dimmer - $ 14.95 Extra Small (1 Meter) / Butter dimmer (+ $ 4.95) - $ 19.90 Extra Small (1 Meter) / Dimmer fanaraha-maso lavitra infrared (+6.95) - $ 21.90 Extra Small (1 Meter) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 23.90 Kely (2 metatra) / Tsy misy dimmer - $ 19.95 Kely (2 Meters) / Butter dimmer (+ $ 4.95) - $ 24.90 Kely (2 Meters) / Dimmer fanaraha-maso lavitra tsy misy fotony (+6.95) - $ 26.90 Kely (2 metatra) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 28.90 Medium (3 Meters) / Tsy misy dimmer - $ 24.95 Medium (3 Meters) / Butter dimmer (+ $ 4.95) - $ 29.90 Medium (3 Meters) / Dimmer fanaraha-maso lavitra infrared (+6.95) - $ 31.90 Medium (3 Meters) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 33.90 Lehibe (4 Meters) / Tsy misy dimmer - $ 29.95 Large (4 Meters) / Butter dimmer (+ $ 4.95) - $ 34.90 Lehibe (4 Meters) / Dimmer fanaraha-maso lavitra tsy misy fotony (+6.95) - $ 36.90 Lehibe (4 Meter) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 38.90 Extra Large (5 Meters) / Tsy misy dimmer - $ 34.95 Extra Large (5 Meters) / Butter dimmer (+ $ 4.95) - $ 39.90 Extra Large (5 Meters) / Dimmer fanaraha-maso lavitra infrared (+6.95) - $ 41.90 Extra Large (5 Meters) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 43.90 Extra Extra Large (6 Meters) / Tsy misy dimmer - $ 39.95 Extra Extra Large (6 Meters) / Butter dimmer (+ $ 4.95) - $ 44.90 Extra Extra Large (6 Meters) / Dimmer fanaraha-maso lavitra infrared (+6.95) - $ 46.90 Extra Extra Large (6 Meters) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 48.90
Extra Small (1 Meter) Kely (2 metatra) Medium (3 Meters) Lehibe (4 metatra) Extra Large (5 Meters) Extra Extra Large (6 Meters) Length
Tsy misy dimmer Kitendry dimmer (+ $ 4.95) Dimmer fanaraha-maso lavitra infrared (+6.95) MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) Dimmer Type
Ianao dia nitady jiro tsy mitongilana tsy manimba banky.
Mampahafantatra LX1 avy amin'ireo mpanamboatra The MediaLight.
Fantatray fa mahasosotra tokoa ny mahita jiro miangatra avo lenta. Izany no antony nanorenanay ny jiro LX1 Bias Lighting - jiro mitongilana tanteraka amin'ny vidiny mora. Mihoatra ny mpifaninana rehetra ary ambany ny vidiny.
Ny ampahany tsara indrindra dia tsy mila mahafoy kalitao ianao raha te hanana vola. Amin'ny alàlan'ny fanovana madinidinika ao amin'ny famaritana ny hazavana hazavana MediaLight misy anay, dia afaka nanamboatra jiro fitongilanana avo lenta izay nihoatra ny fenitry ny indostria izahay.
MediaLight dia nanjary fenitra indostrialy ho an'ny matihanina erak'izao tontolo izao, nampiasaina saika tamin'ny studio rehetra tamin'ny fampielezam-peo sy horonan-tsary, ary natokisan'ny mpandoko loko noho ny tena fahamarinanay - saingy tsy namaky ny tsenan'ny teatra an-trano mihitsy izahay noho ny vidin'ny The MediaLight. Mandrak'izao.
Azonao atao izao ny miaina ny zavatra tsapanao raha misy jiro matihanina naoty ao amin'ny efitranonao manokana. Miaraka amin'ny LX1 Bias Lighting, afaka mahita sarimihetsika misy loko marina ianao, toy ny nakan'ny talen'ny lahateny azy. Ho afaka mankafy ny hoditrao voajanahary kokoa koa ianao rehefa mijery tele na fandaharana amin'ny fahitalavitra. Ary raha miloka ianao? Tsy hino ianao hoe ohatrinona ny lalao tsara kokoa amin'ny LX1 napetraka.
Raiso ny anao anio. Misaotra anao ny masonao.
Manontany tena ianao hoe ahoana no mampitaha ireo fiasa ireo amin'ny MediaLight sy ny jiro bias hafa? Tsindrio eto raha hampitaha!
• 6500K (voamarina amin'ny ISF fa marina)
• Fanondroana fandikana loko (CRI) 95
• Mifandray amin'ny alàlan'ny USB 3.0 amin'ny fahitalavitrao (ny halavany fohy kokoa amin'ny asa 1m-4m amin'ny USB 2.0)
• USB sy DC mpampifandray amin'ny fifandraisana tsy voafetra sy ny safidin'ny mpanara-maso
• Ahitana tariby mitondra 15 santimetatra (Raha lavitra lavitra ny sisinao USB, mety mila tariby fanitarana ianao. Manolotra fanitarana 0.5m nekena ho $ 7.95 isika. Ampidirina tsy ampiarahina ihany koa ny iray amin'ny MediaLight Mk2 Flex).
• Ampifanaraho amin'ny dimmer (amidy misaraka) ny LX1, mba hamoronana rafitra jiro fitongilanana tanteraka
• Warranty 2 taona
5.0 Miorina amin'ny 87 Reviews
Fanaterana haingana, fametrahana mora. Nividy 1 ho an'ny fahitalaviako ary iray hafa ho an'ny mpanara-maso ahy. Hatreto aloha dia mbola mety tsara.
Kely (2 Meters) / Dimmer bokotra (+ $ 4.95)
Miasa araka ny nandrasana.
Mora apetraka aorian'ny fanarahana ny torolàlana. Napetraka amin'ny LG C1.
Medium (3 Meters) / Tsy misy dimmer
Miasa tanteraka amin'ny filàna maro
Efa manana Mk2 aho ho an'ny fahitalavitra LG OLED vaovao 83 "(ary tena faly amin'izany aho). Na izany aza, amin'ny alàlan'ny famirapiratan'ny LG dia manjelanjelatra, na dia milomano ambany aza araka ny ahafahan'izy ireo dia nanana jiro valizy 2 aho Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=2 '' jiro ao amin'ny efitrano. Tena mandeha tsara izy io. Ny adaptatera Wifi dia tsy miasa amin'ny fampiharana ampiarahina fotsiny, fa azo ampidirina ao amin'ny hub misy Samsung Smart Things, izay azo ampidirina ao amin'ny lavitra Harmony ahy. Na dia tsy afaka nanao izany aza aho ampidiro ao anatin'ny filaharako "rehetra eny rehetra" ao amin'ny Harmony ilay hazavana, olana momba ny Harmony / Smart Things izy io, fa tsy hazavana Media. Na izany aza, io "olana" io dia mila fanindriana bokotra iray fanampiny eo amin'ny lavitra Harmony. Tsapako fa ity dia tsy ny fampiasana ny LX1. Fa, raha sanatria misy manana sa izaho olana momba ny jiro nataoko, mandeha tsara ity vahaolana ity.
Kely (2 metatra) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95)
Fanompoana kanto mahagaga
Ny jiro any aoriana dia mahavariana ary mameno ny habetsaky ny jiro amin'ireo samsung 55 nitaingina antsika. Noheveriko fa tsy nanana sombin-javatra aho, koa nifandray tamin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa aho ary novaliany haingana dia haingana ary tamin'ny fomba feno no nanatonana an'io raharaha io. Azonao lazaina izany fomba izay olona tena miahy ny vokariny ary mahazo antoka fa faly ny mpanjifa. Hanoro hevitra azy ireo aho ho an'izay mitady jiro '!
Large (4 Meters) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95)
Mora ny mampiasa asa tena araka ny voalaza, novidina tamin'ny magie home wifi add-on satria manana Sony tv aho izay manana ny olana amin'ny tsy famonoana herinaratra amin'ny USB rehefa maty ny tv. Miasa tanteraka ary manampy amin'ny mifanohitra tsy manolana loko